Iska horimaad hubeysan oo ka dhacay Kaaraan iyo Yaaqshiid (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Iska horimaad hubeysan oo ka dhacay Kaaraan iyo Yaaqshiid (SAWIRRO)
Iska horimaad hubeysan oo ka dhacay Kaaraan iyo Yaaqshiid (SAWIRRO)
Iska horimaadyo hubeysan ayaa maanta ka kala dhacay Degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir, ka dib markii Ciidamada Dowladda ay rasaas ku kala eryeen dad bannaanbax ka waday Degmada Kaaraan.
Dadweynaha reer Muqdisho ayaa maanta bannaanbaxyo looga soo horjeedo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dhigay Degmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid iyo Cabdicasiis.
Bannaanbaxayaasha ayaa watay sawirrada Madaxweynaha oo is talaab uu saaranyahay iyo boorar sidoo kale lagu saluugsanyahay, dhabaha ay dowladda u mareyso maamulidda doorashooyinka dalka.
Ciidamada Booliska ee Degmada Kaaraan ayaa rasaasta nool nool u adeegsaday dadkii bannaanbaxa ka waday wadada Fagax, qaybteeda Degmada Kaaraan, waxaana xigay in maleeshiyaad hubeysan ay iska caabin ugala hortaggaan Ciidamada Booliska. Iska horimaadkan ayaa saameeyay Degmada Yaaqshiid.
Dhacdadaasi ka dib waxaa la soo wariyay in ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad gaadiid lagu geeyay Degmooyinka Yaaqshiid iyo Kaaraan.
Goobjoogeyaal ayaa sheegay in Ciidanka Haramcad ay degmooyinkaasi u yimaadeen, si ay garab u siiyaan Ciidamada Booliska, oo iska horimaad uu dhex maray maleeshiyadaasi, oo taabacsan Golaha Midowga Musharaxiinta.
Maleeshiyadan ayaa la sheegay in lagu arkayo qaybo ka mida wadooyinka Degmooyinka Yaaqshiid iyo Kaaraan, xilli ay ku sugan yihiin Xoogaga Haramcad, lamana soo sheegin wax iska horimaad ah oo labada dhinac halkaasi ku dhex maray, illaa iyo iminka, waxaase laga cabsi qabaa in foodda is daraan.
Xiisad ayaa laga dareemayaa qaybo ka mida degmooyinkaasi, iyadoo tani lagu macneeyay mid bilow u ah saan-saanta colaadeed ee ka dhalan karta, haddii aanay dalka ka dhicin doorasho leesla ogolyahay.
Inta laga warqabo laba qof ayaa ku dhimatay, dhawr kalana way ku dhaawacantay dadkii maanta lagu rasaaseeyay Degmada Kaaraan.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo la kulmay Guddigii duufaantii GATI (SAWIRRO)
Next articleGalmudug oo dabacsanaan u muujisay Ra’iisal Wasaare Rooble